Dani Alves Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu
Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Brazil Dani Alves Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu
LB na-egosi Full Story of a Football Bull kasị mara aha na aha njirimara; "El Loco [onye nzuzu]". Anyị Dani Alves Storymụaka Akụkọ ya na enweghị akwụkwọ akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge.
Nyocha a na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya na eziokwu gbasara ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ike ya dị elu, mana ole na ole na-ele Dani Alves Bio nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-enweghị adieu ọzọ, ka anyị bido.
Dani Alves Childhood Akụkọ - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
A mụrụ Daniel Alves da Silva na 6th nke ụbọchị May 1983 na Juazeiro, Bahia, Brazil. A mụrụ ya nne ya, Dona Lucia (nwunye ụlọ) na nna, Domingos Alves Da Silva (onye ọrụ ugbo).
Nna ya, Domingos na-akọwa na mgbe Dan dị nwatakịrị, ọ dị iche na ụmụaka ndị ọzọ nọ n'ógbè ha. O juputara n'ike dika nwatakiri.
Malite na nwata, Dani biliri na nna ya na 4 ma soro ya gaa n'ugbo ahụ iji nyere ya aka ịrụ ọrụ na Salitre, obodo nta dị na 30km dị anya na Juazeiro.
Mgbe Dani Alves dị obere, ọ na-achọta oge maka nnukwu agụụ ya, nke ya na ndị enyi ya na-egwu bọọlụ. Ya na ụmụaka ndị agbata obi ya gbara bọọlụ. Nna Alves nwere mmasị maka football nakwa n'ikpeazụ jisiri ike ịhazi otu egwuregwu bọọlụ nke ya.
Alves, mgbe ọ dị afọ iri, malitere dị ka onye na-agụ nwa, mana n'ihi enweghị goolu o nyere, nna ya weghachitere ya dị ka onye ziri ezi, ọnọdụ ọ gara n'ihu maka ndụ. Nwa Dani na-akọ ubi ma na-ere ngwaahịa ugbo iji mepụta ego maka oge ntorobịa ya na Juazeiro na Bahia. Ọ bụ Sevilla nyere ya ohere igwu egwu na Europe. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Ọnye na-bụ Dinora Santana? Dani Alves Ex-Nwunye:
N'azụ FC Barca akụkọ, enwere nwanyị mara mma. Dinora Santana na Daniel Alves malitere ịlụ na ụbọchị ọhụụ, 1st Jenụwarị 2005.
Abụọ ịhụnanya abụọ kpebiri ka eriri eriri na 2008. Ha nwere ụmụ abụọ, Daniel na Vitória.
Alụmdi na nwunye ha dịgidere naanị afọ atọ tupu di na nwunye ahụ ekwenye na nkewa na ịgba alụkwaghịm na 2011. Ihe kpatara kpatara ịgba alụkwaghịm bụ ụbọchị amabeghị. Agbanyeghị, achọpụtara na Dani Alves sooro onye na-eme ihe nkiri na Brazil bụ Thaissa Carvalho gbaghaa.
Carvalho apụtawo n'ọtụtụ mmemme na TV ndị Brazil wee mụọ nri na nọọsụ na Mahadum Ọchịchị Rio de Janeiro. N’okpuru bụ foto nke Dani na Thaissa.
Kemgbe ịgba alụkwaghịm ha, Dinora Santana ka bụ onye nnọchi anya Dani Alves ọbụlagodi mgbe ha gbara alụkwaghịm. Ọ nọgidere na-abụbu nwunye Dani Alves, nwanyị ọchụnta ego, agbata obi, ọkara nwanne na nne nke ụmụ ya. Dinorah na-ahọrọ ihe omume, na-ege ntị na atụmatụ ọgbakọ ma na-elekọta di ya mbụ mgbe ọ merụrụ ahụ.
N'ezie, ị ga-ekwe ka nwunye gị mbụ na-elekọta anya gị? Kedu maka ndụ ọkachamara gị? Otutu umu nwoke gha ama jijiji mgbe ha chere na nke a puru ime.
n'ihi na Dani Alves, ọ bụ ihe nkịtị. Dani na Dinorah Santana da Silva bụ ndị mmekọ na ụlọ ọrụ ise: mmadụ abụọ nọ na Brazil, otu n'ime ọrụ ugbo na otu ụlọ ahịa ụlọ, na atọ na Spain ((1) “lọ ọrụ “ụlọ” ọzọ (2) “Cedro Esport”, nke na-ese onyinyo onye ọkpụkpọ ahụ, na (3) “Flash”, ụlọ ọrụ na-elekọta ndị na-eme egwuregwu).
Ha bụkwa ndị agbata obi, na-ebi n'okporo ámá dị nso, ya onwe ya, dịka nwanyị ọchụnta ego na-elezi anya, na-elezi anya na onye ahịa ya nọ n'ọnọdụ kacha mma.
“Anọwo m na-elekọta nri, karịsịa mgbe o merụrụ ahụ́. M na-ajụ ma ọ na-eri nri ma ọ bụrụ na ọ na-a milkụ mmiri ara ehi (ọchị). Abụ m ọkara nwanne, ọkara nne ”S .s kwuru Dinorah onye a na-akpọbu nwunye. Maka Dinorah, nnukwu ihe kpatara ya ji di nso na di di ya abụghị ụlọ ọrụ, mana ụmụaka abụọ ahụ: Daniel na Victoria.
Ọnye na-bụ Joana Sanz? Nwunye Dani Alves:
Na June 2017, Dani Alves kpebiri ime mkpebi nke ịlụ di ọzọ. Ọ lụrụ ihe atụ Spanish bụ Joana Sanz (10 afọ ya obere) na agbamakwụkwọ nzuzo na Ibiza.
Joana Sanz bụ ụdị ejiji site na ọrụ. Ọ bụ ememe ịhụnanya na agwaetiti Spanish, nke onye Barcelona gara aga na-ahọrọ iyi uwe ọcha iji kwekọọ na nwunye ya mara mma.
Emere agbamakwụkwọ Alves dị ka akọ dịka o kwere mee mana ndị ọbịa ole na ole na nwunye ahụ kesara foto nke mmemme ahụ na Instagram.
Dani Alves Ndụ Ezinụlọ:
Dani Alves sitere na ezighi ezi na ezi na ulo tupu oge egwuregwu bọọlụ nna ya wetaara ya ghọrọ onye na-agbanwe egwuregwu. Domingos Alves Da Silva ka na-eje ozi dị ka onye nchịkwa na ụlọ ọgbakọ ahụ zụlitere nwa ya nwoke.
Mazị Domingos Alves da Silva, nna Dani Alves ka a họpụtara n'oge na-adịbeghị anya dị ka Onye isi njikwa bọọlụ nke ọgbakọ, Juazeiro Social Clube. Ezinụlọ Alves nwere obi ụtọ maka isi ha, onye mere ka ọ nwee mmasị na football na ịgbaso ndị otu egwuregwu bọọlụ Brazil site na nwata.
Daniel Alves da Silva nwere mmasị na ndị nkuzi atọ ọ hụrụ n'anya na-esonyere na ọzụzụ ọzụzụ nke Brazil National Team na Salvador: Maria Lúcia, nne ya, Domingos, nna ya, na Lucivânia, nwanne ya nwanyị. N’okpuru bụ foto nke Dani Alves nne, Dona Lucia onye hụrụ ya n’anya nke ukwuu.
Dani Alves Ndụ nke Onwe:
Dani Alves nwere àgwà ndị a na àgwà ya.
Ike Dani Alves: Dani na-atọ ụtọ ịnọnyere, onye a pụrụ ịtụkwasị obi, onye nwere ndidi, nke bara uru na nke nwere ntọala.
Nsogbu Dani Alves: Daniel nwere ike ịbụ onye isi ike, nke na-enweghị ihe ọ bụla.
Gịnị Danni Alves nwere mmasị: Ugbo, nri, egwu, romance na-arụ ọrụ na aka ya
Nso Danni Alves anaghị amasị: Mgbanwe na mberede, nsogbu na nchebe nke ụdị ọ bụla.
Dani Alves bụ onye ga-arụsi ọrụ ike iji ghọrọ mkpụrụ nke ọrụ ya. Ọ na-eche na ọ dị mkpa ka ịhụnanya na ịma mma gbara ya gburugburu mgbe niile, tụgharịa gaa ụwa, ịmasị anụ ahụ, na ihe ụtọ anụ ahụ. Dani nwere mmetụta anụ ahụ, na-emetụ n'ahụ ma na-elekwa anya na-atọ ụtọ dị ka ihe kachasị mkpa ya niile.
Dani Alves Eziokwu:
Dani Alves bụ onye nlekọta nke nna na-egwuri egwu.
Mụ na Dani Alves so n'òtù ọ bụla, a ghaghị ime egwú ndị South America n'oge ememe.
Dani Alves mere nke a ka ọ bụrụ C Ronaldo.
Dani na onye enyi ya na enyi ya kachasị mma na - Neymar.
Dani Alves ismkpa ókè agbụrụ Eziokwu:
Na 27 Eprel 2014, n'oge egwuregwu na ama egwuregwu Villarreal, El Madrigal, ndị Villareal na-akwado David Campaya Lleo lekwasịrị anya Alves, bụ onye tụụrụ ya otu banana.
Alves weere ọka ahụ, kpoo ya wee rie. Ọ zara ihe ahụ merenụ site n'ikwu, sị:
“Anyị ataala ahụhụ a na Spen ruo oge ụfọdụ. Ikwesiri iji ya mee ihe ọchị. Anyị agaghị agbanwe ihe ngwa ngwa. Ọ bụrụ na ị naghị ewere ya dị ka ihe dị mkpa, ha agaghị emezu ebumnobi ha. ”
Egwuregwu ndị otu NeymarNzaghachi ya - tinye foto ya na soshal midia na-erikwa banana - wee gbasaa. Ndị ọzọ na-eji ụkwụ agafe ebe ọ bụ na ha were foto nke onwe ha na-eri nri unere.
Alves kwuru na onye ọ bụla tụbara banana na ya kwesịrị ihere, na na 30 April 2014, e jidere mmadụ na njikọ ahụ. E mesịrị mezie Villareal € 12,000 maka ihe ahụ merenụ.
Alves abụrụla onye a na-akwa emo na Spain. O mere mkpesa banyere mmekpa ahụ agbụrụ mgbe abụ abụ na-akwa ya emo n'oge Copa del Rey nke ikpeazụ na Real Madrid na 2013.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ anyị bụ Dani Alves Childhood akụkọ tinyere akụkọ eziokwu ndị ọzọ. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n’isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị !.